Ukuphononongwa kweSikhulo seKlabhu yamaKlabhu e-Accu-Length Junior
IiKlabhu zee-Accu-Length zanda ukukhula kunye nomntwana wakho
Ubude be-Accu yayingu-brand brand esetyenziswe yinkampani eyenziwe kwaye idayise amaqela amagosa egalofu. Iiklabhu zafika kwisiseko sesiseko seeklabhu ezine zegalufu kwaye ziquka izicwangciso zecacac. Njengomntwana osekhulile kwaye wakhula ngokuphakama, iiklabhu zinokwandiswa ngokufaka i-spacer elide eli-1 intshi. Xa inkwenkwe ikhule kancane, enye inxalenye yongezwa, kwaye njalo njalo.
Usenokuba uqaphele ukuba sasisebenzisa ixesha elidlulileyo kumhlathi ongentla.
Kungenxa yokuba i-Accu-Ubude, ngelanga, ayisekho shishini. Ukuhlaziywa kwethu kwasekuqaleni kweeklasi zase-Accu-Length ezandisiweyo ezincinci zeeklasi zegalufu kubonakala ngezantsi.
Ungayithenga iiKlabhu ezide kakhulu namhlanje?
Iiklabhu azange zenziwe kwaye azizange zibe seminyaka emininzi. Ukufumana isitsha esitsha (esingasetyenziswanga) kunzima, kodwa akunakwenzeka. Yenza uphando lwewebhu; khangela ii-Amazon.com, i-Overstock.com kunye nabanye abathengisi abaqhelekileyo abathengisa i-left-overs; jonga ii-website ze-golf ezithengisa iimveliso ze-niche kwaye uthengise ukuthengwa kwezinto zokuthengisa.
Ngaba ezinye iinkampani zenza iiClubs eziLandisiweyo namhlanje?
Okwamanje asiqapheli naluphi na owona mkhulu-makhankqalazi ekhatywayo yegalufa eyenza ukwandisa amaqela amancinane. Nangona kunjalo, kukho inkampani ye-niche, epecgolf.com, ekhoyo kwimarike.
Ukuhlaziywa kwangaphambili kweCcuck-Length Junior Golf Clubs System
Ukuhlaziywa oku kulandelayo kwanyatheliswa ngo-Dec. 14, 2004:
Kuye kube nantoni na inqaku elithile elihambelana nayo yonke iqoqo leeklabhu ezincinci zegalufa: ngelixa umntwana wakho ekhula, iiklabhu zihlala zilinganayo.
Oko kuthetha ukuba umntwana wakho ukhula ngokukhawuleza, iiklabhu zakhe ezincinci zihamba ngokukhawuleza. Kwaye kubazali, oko kuthetha ukuchitha imali kwiisethi ezintsha zeeklabhu. I-Accu-Ubude ijolise ukulungisa loo ngxaki ngokuzisa amaqela amancinci akhula kunye nabagadi begolane abancinci abasebenzisa.
Imfihlelo "kwi-Acac-Length Expandable Pro Quality Junior Golf Club System" ihlala kwi "teknoloji ye-Spacer" yayo. Iingqameko zeeklabhu ze-Accu-Length zingavulwa kwaye zingenakunyuswa phantsi kwinqanaba elingaphantsi kwelo xesha.
I-spacers enye-intshi ede yifakwe kwaye ivalelwe kwindawo. Kwaye ke, unayo igalofu yegalufa eyiyo intshi enye.
Omnye wabaqulunqi beeklabhu ze-Accu-Length ngu-Ernie Vadersen, uMongameli weQela le-Vadersen Design, kunye nomsunguli we-Snake Eyes Golf.
"Yona mveliso ekhethekileyo kakhulu endandisebenza kuyo," kusho uVadersen. "Le yilebhu yokuqala eyakhayo eyenzelwe umdlali omncinane. Xa ndifika emfanekisweni, ndathi kubo kuphela indlela endiyenza ngayo ukuba undivumela ukuba ndiyilwe into ebaluleke kakhulu kwiklasi yokuqala Ndiyaziwa ngeeklasi zegalufa zekhwalithi. Andiyi kuyila inkunzi yentloko yentsimbi kunye nokunqunyulwa kwe-shaft ukuya kwi-jab kuyo kwaye ube nehlobo elithile lebhola yegalufa. . "
"Thina" kumbuzo ngu-On-Track Sports, LLC, inkampani yomzali we-Accu-Length.
"Bonke abakhuphiswano bethu banemilinganiselo ephakathi kwamaqela abo amancinane," kusho uRick Rutter, uMongameli, u-COO kunye noMququzeleli weMidlalo ye-On-Track. "Njengokuba inkunzi ikhula, iiklabhu zakhe ziyancipha kuye kwaye inkumbulo yakhe kunye nokukhumbula imisipha iyatshintsha. Akunjalo! Imemori ye-muscle kunye ne-swing motion kufuneka ihlale ifanayo kwiziphumo zokufunda ezifanelekileyo.
Ngenxa yokuba yethu imveliso kuphela yegalufa ekhula njengoko umntwana ekhula, ivumela ukunyakaza ukuhamba kunye nememori ye-muscle ukuba ibe yinto efanayo. "
Inkqubo ye-Accu-Length ivela kwimodelo emine eyahlukeneyo, eyenzelwe ukuqala kunye nabantwana abafake izigaba ezine zokuphakama ezahlukeneyo. I-Series Series yama-500 (i-Purple) yenzelwe abadlali abatsha kakhulu, abantwana abangama-39-47 intshi ende. I-Series Series ye-1000 (Ephuzi) yintwana 45-55 intshi efunda nje umdlalo. Uchungechunge lwe-2000 (oluBomvu) lubantwana abama-51-59 amasentimitha kwaye lubonisa i-shaft ekhuni kunye ne- loft efanelekileyo kwi-trajectory ephezulu kunye ne-loft. Iingqungquthela ezingama-3000 (iGrey) zenzana ezingama-55-62 intshi; iiklabhu zayo zinobuchule obunamandla kwiiklabhu zabantu abadala, kodwa ngokuxolelwa ngokukhululeka kokusetyenziswa.
I-1000, 2000 ne-3000 uchungechunge iza nenkuni, i-7-iron, i-pitching wedge ne-putter.
Iingqungquthela ezingama-500 ziyafana, ngaphandle kokuba ukukhangela kwinqanaba elikhethekileyo. Zonke iisethi zibandakanya isikhwama sokumisa ezimbini (imibala yayo ifana nombala wechungechunge) okhulayo njengoko iiklabhu ezikuyo zanda; i-CD-ROM yokufundisa; 12-inch spacers; izixhobo zebandla kunye nezixhobo zokuvala; isikhwama esiphethe i-spacers, izixhobo kunye nezikrini; kunye nereyati yokucoca ngokufanelekileyo.
Iiklabhu ezikhethiweyo, ezithengiswa ngokwahlukileyo, ziquka umqhubi ophezulu kunye nentsimbi e-5.
Iqoqo le-500 liphethe i- MSRP ye-$ 139.99; ezinye iintlobo ezintathu, $ 199.99.
Beka konke, kunye nantoni na? Ingaba i-Accu-Length junior isetyenzisile izithembiso zayo?
Sithatha i-Accu-Length set to one yezona zikarhulumente ezinqabileyo kwiinkqubo zegalufa endaweni yethu, kwaye siyiyeka nabaqeqeshi beprogram ngenyanga.
Isiphetho sabo: Iiklabhu ze-Accu-Length ziyimpumelelo enkulu. "Yinto engummangaliso," omnye umqeqeshi omncinane wathi. "Ndiyayithanda kakhulu ukuyisebenzisa, kwaye ndicinga ukuba batyala ngokufanelekileyo kubazali banoma iyiphi i-golfer encinane."
Abaqeqeshi basitshele ukuba iiklabhu ziphezulu ukuqala, kungakhathaliseki ukuba iteknoloji ye-spacer. Kodwa uphonsa kwii-spacers, kwaye unento engcono ngakumbi.
"Abazali bafanele bagcine imali ngokukhawuleza kunye nalezi zinto," kusho enye pro. "Sithengisa ezinye iiseti ezincinci eziza kunye nezicwangciso ezifanayo (ezine iiklabhu kunye nebhegi) malunga needola ezili-130. Ezi zibiza kakhulu, kodwa zihlala ixesha elide ngenxa yokuba zandisa."
Ukufaka ii-spacers kulula kakhulu, i-pros yathi, kunye neeklabhu ziziva ziqinile emva kokuba i-spacers ifakwe.
Isikhalazo kuphela: Abanye babecinga ukuba iiklabhu ze-Accu-Length zazincinci kwicala elincinci kubadlali abancinci kwiibanga ezilinganiselweyo-kodwa loo mbambano ozozixazulula njengoko umntwana ekhula.
Ngokubanzi, iiklabhu ze-Accu-Length zangqina.
Ngaba amaAmazons ayenene ngokwenene?
Iifolishi zangaphambili zeThuthuthu, Ukutshintshwa kweziTywina